Waxqabadka Todobaadka Maamulka Gobolka Banaadir – Radio Daljir
Waxqabadka Todobaadka Maamulka Gobolka Banaadir
Maarso 14, 2019 8:47 b 0
Maamulka Gobalka Banaadir ayaa dadaalkii ugu Badnaa ku bixinaya Dhismaha iyo Dayactirka Wadooyinka magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Agaasimaha Howlaha Guud ee Maamulka Gobalka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa Warbaahinta u sheegay in iyadoo la fulinayo amarka Duqa Muqdisho ee ahaa in laga shaqeeyo Billicda iyo Nadaafada Caasimadda in la Laami la saaray Wadada Ceelgaabta ee dhexmarta degmada Xamar Jajab.
Gudomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Caasimada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan(Yariisow) ayaa xariga ka jaray todobaadkaan maktabad ay caruurta wax ku bartaan oo laga hirgaliyay Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in Maktabadaan ay qayb muhiim ah ka qaadanayo Waxbarashada Ubadka Soo koraya.
Duqa Muqdisho ayaa Todobaadkaan Shirar looga hadlayay Nadaafadda Caasimadda iyo Horumarinta Barnaamijka Isxilqaan la yeeshay qaar ka mid ah Bulshooyinka degmooyinka Wadajir iyo Waabari.
Mudane Injineer Yariisow ayaa Bulshada kula dar daarmay inay ka shaqeeyaan Horumarinta Nadaafada, iyadoo uu sheegay in loo baahanyahay in Qof kasta si isxilqaan ah uu kaga shaqeeyo horumarinta Magaalada.
Sidoo kale Maamulada degmooyinka Gobalka iyo Shacabka Muqdisho ayaa wali ku hoalan ka qayb qaadashada ololaha Isxilqaan ee dib loogu howlgalinayo xarumaha danta guud ee ku yaala Muqdisho sida Tiyaatarka Qaranka, Maktabada iyo Madxafka Qaranka.
Bulshada Degmada Waaberi ayaa si aad ah ugu farxay una soo dhoweeyey in Suuqii Cali Boolaay ee degmadaasi dib loo soo celiyo, Iyadoo Guddoomiyaha gobalka uu balan qaaday in si deg deg ah looga shaqaynayo in dib loo soo celiyo shuuqaas oo haatan shiyaad gaar ah ay dhisteen.